ခင်မင်းဇော်: အလွမ်း ဒီဇင်ဘာ
Posted by ခင်မင်းဇော် at 5:07 AM
ကျနော့် သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ... အရက်ပုလင်း လွှင့်ပစ်တာ... မခင်မင်းဇော်ပဲ ရှိတယ်...
သိသလောက်ကတော့... ဘယ်သူမှ လွှတ်မပစ်ဖူး... အဖုံးဖွင့်ပြီး .... သွန်ပစ်တာ...း)
မယုံရင် .... အေအက်စ်အို... ကို... မေးကြည့်.... လေးဂါလံ... အရက်ပုံးကြီးကို... ဘယ်သူ သွန်ပစ်သလဲ...လို့....း)
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ.... ကျနော်ပါ... ၀ိုင်းပြီး... ကူပြီး... လွမ်းပေးသွားတယ်.... သူငယ်ချင်း... အရင်းခေါက်ခေါက်ကြီးတွေကို.... လွမ်းလို့...း)
ဟော…. တွေ့တယ်မို့လား။ အလွမ်းတွေ ပွင့်အန်ထွက်ကျလာပြီ။ တင်အောင်နီရဲ့ “အလွမ်းလာလို့ လက်တို့လေသလား” ဆိုတဲ့ ကာတွန်းရုပ်ပြလေးကို သတိရတယ်။ မခင်မင်းဇော်တယောက် အလွမ်းတွေ ပွင့်ထွက်လာအောင် ကျနော် ကွန်မင့်ကဏ္ဍက တဆင့် လက်တို့လိုက်တာလေ။
မဒမ်ပေါနဲ့ ကျနော်လည်း အရင်ကတော့ လျှာနဲ့သွားပီပီ တကျက်ကျက်ပဲ။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ အသက်တွေကြီးလာတော့ မကျက်နိုင်တော့ဘူး။
အဲဒီနေ့က ဖဲဝိုင်းကို လိုက်လာတာ မဒမ်ပေါ သာဆိုရင် ပုလင်းကို ပစ်ထုတ်ဖို့ ဝေးစွ။ သူပါ တခွက်တဖလား ၀င်မော့နေဦးမယ်ထင်ပါရဲ့။
ဟွန်းပြောရင်.. ဟိုဘက်က ပါတယ်ထင်ဦးမယ်။ တကယ်ဆို အဲလို လုပ်စရာလား..။ သူ့နားကပ်သွား.. ဗိုက်ခေါက်ကို သေချာ ဆွဲလိမ်ပြီး အရက်ပုလင်းကိုပါ ကောက်မပြီးတော့ အိမ်ပြန်ခေါ်ခဲ့..။ အိမ်ရောက်မှ အဲဒီပုလင်းကို နှစ်ယောက်တူတူ သောက်ပစ်ရမှာ အေ့..။ အဲဒီတုန်းက ငါ့ကို ဖုန်းဆက်ပြီး တိုင်ပင်လိုက် ပြီးရော.. ခါတည်း။
နော်ဝေးတောင် လာချင်သဗျား.. ၆ လလောက် နေမမြင်ရဘူးဆို..?
ခုမှပဲ ချစ်ချစ်ကိုလွမ်းတာတွေ ပွင့်အန်ထွက်လာတော့တယ်။
လွမ်းရတဲ့အဖြစ်ကလေးတွေကိုလာဖတ်ရင်း စိတ်တွေအတိတ်ကိုပြန်ပြေးပြီး လင်းလဲလွမ်းးးသွားတယ်
ဟားဟား... တော်တော်လေး ရယ်လိုက်ရတယ်။ အန်တီခင်ကလည်း ပြန်မခေါ်ဘဲ တပတ်လောက် ပစ်ထား ပြီးရော။:P
အမရေ ဟိုတစ်ခါ အမပီအေကလည်း ကျောင်းကဆိုတာ ကိုခုမှနားလည်သွားတာ။ ရွာသားလေးတို့ ကအဲလောက်တုံးတာ အတာဗျ။ စာလေးကိုဖတ်ပြီးတကယ်ကြည်နူးရတယ်ဗျာ။ လွမ်းပါဗျာ လွမ်းပါ...
အမရေ- ခုတော့..တကယ်လွမ်းပြီပေါ့- နောက်တခါ ပီအေ ကို တဲ့နေတုန်း ကြိုမှာထား-
မိန်းကလေးတွေက..မလာနဲ့ဆိုတာ..လာလို့ပြောတာ..ဆန့်ကျင်ဖက်ကို ယူပါလို့-း)
ကိုအောင်သာငယ် ..သိနေတယ်လေ ဘယ်သူ့ လက်ချက် ဆိုတာ...
ကိုပေါ... ကျမက အရက်နဲ့ကို မတည့်တာ အလာဂျစ် ရှိနေလို့ ... နို့မို့များကတော့ ... ကျားမတန်းတူရေးပဲ ဟဲဟဲ
သယ်ရင်းမေငြိမ်း... ဆရာမကြီးကို ဖုန်းအရင်ဆက်ရမှာ နော် ဟုတ်တယ်..
craton.. နေရောင်ကိုမမြင်ရတာ ဆိုပေမယ့် ခုကတော့ နေ့လည်ဘက်တွေ လင်းနေဆဲပါ အော်စလိုကတော်သေးတယ် နော်ဝေးမြောက်ပိုင်းမှာ အဲလိုဖြစ်တယ် ပြောတယ်
လင်း...လင်းဆီက အလွမ်းဘုရင်မဘွဲ့ ခဏငှားနော်...
စိုးဝှက်...တရက်စကားမပြောဖြစ်တာတောင် တော်တော် နေရခက်တယ်ဟ..ကိုယ်ချင်းစာ..
ရွာသားလေးရေ... အာအိုင်တီ ဆိုတာ အစဉ်အလာကြီးပါပေ့... ထိန်းသိမ်းနေတာတဲ့ မပျောက်ပျက်အောင်လေ အမပီအေက...
ကေ...အဲလို ဖောက်သည်ချရသလားဟ.. လ၀တွေလေ..ဟိ
တအိမ်တည်း နေပြီး Email နဲ့ စကားပြောကြတယ်လား။
အဲဒီတုန်းကတော့ အရမ်း စိတ်ဆိုး၊ ၀မ်းနည်းနေမှာပဲနော်။
အခုတော့ လွမ်းစရာ ရယ်စရာ လေးတွေပေါ့။
ချစ်ကြတာ ... ချစ်ကြတာကိုး..
BTW မချိုရဲ့ ဘလော့ကို လာလည်တဲ့ အတွက်ရော၊
ကွန်မန့်တွေ အတွက်ပါ အရမ်း ကျေးဇူးတင်တယ်။
မခင်မင်းဇော် ဘလော့ကို မကြာခဏရောက်ပါတယ်။
ခြေရာ မချန်ဖြစ်တာပါ။ ပို့စ်အသစ်တိုင်း လာဖတ်ပါတယ်။
မခင်မင်းဇော်တို့ မိသားစု ပျော်ရွှင်ပါစေ။
ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ..ချမ်းချမ်းနဲ့ လွမ်းနေတာလေ ဟုတ်လား.
အန်တီ မှတ်မိလား..ဒီလို ဆောင်းအေးအေး ကြီးပဲ ထင်တယ် ချင်းမိုင်မှာ နှစ်ကူး သွားစားကြ တာလေ..အန်တီနဲ့ တီချယ်ကို နောက်က တင်ပြီး..၀ိုင်မူးမူးနဲ့ အဝေးပြေးလမ်းမပေါ် သုံးယောက်တွဲကြီး ဆိုင်ကယ်မောင်းတာ ကံကောင်းလို့ ဘုရားမခေါ်တယ် အဲ့တုန်းကလဲ လွမ်းတယ် မဟုတ်လား ပြော မှန်မှန်..ဟင်း..
ကျွန်တော်လဲ လွမ်းသွားတယ်အစ်မရေ…တင်အောင်နီ ရဲ့ အလွမ်းငါ့ကိုပေး ကို သတိရတယ်။ ပြာလောင်က သတ္ထုဗေဒ က ကျောင်းသား။ ပြောရင်းဆိုရင်း လွမ်းလာပြီဗျာ။ ကျန်းမာပါစေဗျို့…မိသားစုအားလုံး
အရင်ဆုံးပြောချင်တာက ညီမဆီကိုတကူးတကန့်လာလည်ပြီး ကွန်မန့်ပေးသွားတာကို အရမ်းလဲဝမ်းသာပြီးကျေးဇူးလဲပြောမပြတတ်အောင် တင်ကြောင်းပါ၊
အော်စလိုမြို့လမ်းပန်းဆက်သက်ရေး၊အော်စလိုမြို့မှ ပြည်သူများ၏ အားလပ်ရက်ကုန်ဆုံးပုံ၊နောက်ပီး
နိုဗယ်ဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ရုံးသို့ အစ်မသွားတာတွေ...အဲ့ဒါတွေကြည့်ပီးတော့ထဲက ရင်းနှီးခင်မင်နေခဲ့တာပါ။
ပိုစ့်နဲ့တော့ မဆိုင်ပါဘူး။ရေးချင်တာ ရေးခဲ့တာပါ။
ပိုကာဆိုတာမျိုးက ထိုင်ပီးထ လို့ ရတဲ့ကစားပွဲမဟုတ်တာကိုး။ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ လူကြားထဲမှာ ပွဲကြမ်းပြတာလဲမကောင်းဘူး။ ပီအေကြီးပိုကာပွဲက နိုင် လာ တော့ ကြက်သား ကာလသားချက်
ပိုကာက အချစ်ကိုလွှမ်းသွားတာထင်တယ် အစ်မ။ အစ်မမေငြိမ်းလည်း အဲလိုပဲလွှမ်းနေကျ ဟီဟိ။